Vaovao - jereo ny antony miovaova ny haavon'ny baoritra.
Zahao ny antony mahatonga ny haavon'ny baoritra miovaova.
Rehefa miresaka ny tsy fisian'ny baoritra matevina dia olona maro no hieritreritra baoritra matevina. Raha ny tena izy, io fisehoan-javatra io dia tsy mitovy amin'ny mivadika. Soso-kevitra ny hanadihady amin'ny lafiny maro toy ny akora, milina taila tokana, flyover, milina fametahana, fehikibo conveyor, rollers pressure, ary ny faritra aoriana amin'ny tsipika tile mba hamakafaka ny antony sy hamahana azy ireo.
(1) akora fototra
Ny taratasy mifangaro izay ampiasaina dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly. Ohatra, ho an'ny taratasy mihombo 105 grama, ny mpanamboatra taratasy fototra dia tsy maintsy mahafeno ny fenitra nasionaly B. Tsy ampy ny tsindry peratra amin'ny ambaratonga C, ary mora ny miteraka fianjerana mihombo.
Ny asa fanaraha-maso kalitao isaky ny orinasa baoritra dia tsy maintsy apetraka. Ny orinasa dia mametraka ny fenitry ny orinasa voalohany ary avy eo dia mitaky ny mpamatsy azy hanao izany mifanaraka amin'ny fenitra.
(2) Masinina taila tokana
Ampy ve ny mari-pana amin'ny roller mihombo? Rehefa tsy ampy ny mari-pana amin'ny tsorakazo mihombo dia tsy ampy ny hahavon'ny fanamafisana vita. Amin'ny ankapobeny, ny orinasam-pitantanana tsara dia handefa olona hanamarina ny mari-pana amin'ny tsipika fivoriambe iray manontolo (asaina manao izany asa izany ny tompon'andraikitra amin'ny boiler). Rehefa misy ny olana eo amin'ny mari-pana dia ampandrenesina ara-potoana ny mpanara-maso sy ny kapitenin'ilay milina, ampandrenesina ny mekanika hiatrehana izany, ary ireo varingarina fanafana rehetra dia nojerena sy novaina isam-bolana.
2) Maloto ambonin'ilay roller mihombo.
Alohan'ny hanombohana isan'andro, ny roller mihosin-tsofina dia alohan'ny hafanana ary hosasana menaka maotera maivana mba hanadiovana ny taim-pito sy ny fako amin'ilay roller mihorona.
3) Ny fanitsiana ny elanelana misy eo anelanelan'ny rojo dia tena zava-dehibe amin'ny famokarana.
Ny elanelana misy eo amin'ny roller gluing sy ny roller corrugating dia mazàna rehefa alefa mandritra ny 30 minitra ny roller corrugating mba hampitomboana ny fanitarana ilay roller mihombo. Ny hatevin'ny sombin-taratasy misy lanjany ambany indrindra ao amin'ny orinasa dia ampiasaina ho banga. Tokony hojerena isan'andro izany alohan'ny hanombohana ny masinina.
Ny elanelana misy eo amin'ny roller manidina sy ny roller pressure dia matetika voafaritra arakaraka ny toe-javatra famokarana, ary tsy maintsy azo antoka tsara.
Ny elanelana misy eo ambonin'ny roller manidina sy ny roller manidina ambany dia tena zava-dehibe. Raha tsy ahitsy araka ny tokony ho izy izy io dia tsy ho ara-dalàna ny endrik'ilay fanatodizam-bokatra vokarina, izay mety hiteraka hateviny tsy ampy.
4) ny diplaoman'ny akanjo amin'ny roller mihombo.
Zahao ny satan'ny famokarana horonan-tsolika amin'ny fotoana rehetra, raha ilaina ny manolo azy. Manolo-kevitra ny hampiasa roulet mitafo karbida tungsten, satria ny fihenan'ny fiakanjoana avo dia mety hampihena ny vidin'ny famokarana. Raha misy fandidiana milamina dia tombanana ho azo averina ao anatin'ny 6-8 volana ny vidiny.
(3) Miampita ny sidina taratasy
Aza manangona taratasy vita amin'ny boaty tokana be loatra eo amin'ny flyover. Raha lehibe loatra ny fihenjanana, dia horavana ny taratasy vita amin'ny taila tokana ary tsy ho matevina ny baoritra. Soso-kevitra ny hametraka rafi-pitantanana famokarana solosaina, izay afaka misoroka tsara ny tranga toy izany, nefa maro ny mpanamboatra anatiny no manana izany, saingy tsy hampiasa izany izy ireo, izay fako.
Rehefa misafidy mpanamboatra fametrahana flyover taratasy ianao dia tokony hodinihina tsara mba hisorohana ny famokarana voakasiky ny fidiran'ny rivotra amin'ny flyover. Raha be loatra ny fidiran'ny rivotra ao amin'ny flyover, dia mora tokoa ny miteraka fianjerana. Tandremo ny fihodinan'ny mpiray tsirairay, ary zahao matetika ny parallisma an'ny mpiray tsirairay ary tandremo amin'ny fotoana rehetra.
(4) Masinina apetaho
1) Ny roller manery amin'ny roller paste dia ambany loatra, ary ny elanelana misy eo anelanelan'ny rollers manery dia tsy maintsy ahitsy, amin'ny ankapobeny dia 2-3 mm ny elany.
2) Tandremo ny fihodinan'ny radial sy ny axial an'ny roller pression, ary tsy afaka elliptical izy io.
3) Betsaka ny fahalalana amin'ny fisafidianana bara fitendry. Ankehitriny dia mihamaro hatrany ny orinasan-tserasera mifidy ny hampiasa tsoraka fanerena hifandray ho toy ny kodiarana mitaingina (press rollers). Fanavaozana lehibe izany, saingy mbola maro ny toe-javatra izay ilain'ny mpandraharaha manitsy ny tsindry.
4) Ny habetsaky ny paty dia tsy tokony ho lehibe loatra, mba tsy hiteraka fahasimbana amin'ny Lengfeng. Tsy hoe rehefa lehibe kokoa ny haben'ny lakaoly, arakaraka ny maha tsara kokoa azy io, dia tsy maintsy jerentsika ny paozy namboarina sy ny fizotry ny famokarana.
(5) fehikibo canvas
Ny fehin-kibo dia tokony diovina matetika isan'andro, ary ny fehin-kibo dia tokony diovina isan-kerinandro. Amin'ny ankapobeny, ny fehin-kibo dia alona anaty rano mandritra ny fotoana maharitra, ary rehefa avy malemy dia diovina amin'ny borosy tariby. Aza manandrana mamonjy fotoana fohy intsony ary miteraka fotoana very bebe kokoa rehefa tonga amin'ny sehatra iray ny fanangonan-karena.
Mba hamokarana vokatra avo lenta, ny fehikibo lamba dia takiana mba hananana permeabilité rivotra madio. Rehefa avy nahatratra fotoana iray dia tsy maintsy soloina. Aza mahatonga ny baoritra ho maivana noho ny fitehirizana vola vetivety, ary ny tombony dia mihoatra ny fatiantoka.
(6) Roller pression
1) Tsy maintsy ampiasaina ny isan'ny tsindry fanerena. Amin'ny vanim-potoana samihafa, ny isan'ny tsindry fanerena ampiasaina dia tsy mitovy, ary tokony ahitsy amin'ny fotoana mifanaraka amin'ny tena zava-misy.
2) Ny torolàlana radial sy axial an'ny roller tsindry tsirairay dia tsy maintsy fehezina ao anaty filament 2, raha tsy izany ny roller pression miaraka amina endrika lavalava dia hanadino ireo gorodona, ka miteraka hateviny tsy ampy.
3) Ny elanelana misy eo anelanelan'ny roller pressure sy ny takelaka mafana dia tsy maintsy ahitsy, mamela toerana ho an'ny fanitsiana tsara, izay azo ahitsy arakaraka ny endrika (haavon'ny) fiakarana.
4) Ampirisihina ny mpanamboatra baoritra hampiasa takelaka fanindriana mafana fa tsy ny tsindry fanerena, mazava ho azy, ny tanjona dia ny haavon'ny fiasan'ny mpiasa tsy maintsy hahatratra ny haavon'ny fampiasana takian'ny fitaovana mandeha ho azy.
(7) Ny faritra aoriana ny tsipika taila
Ny fidirana sy ny fivoahan'ny antsy famakiana hazo fijaliana dia tsy maintsy mampiasa fitaovana amin'ny masoandro mety. Amin'ny ankapobeny, 55 degre hatramin'ny 60 degre izy miaraka amin'ny tester ny hamafin'ny Shore mba tsy hanorotoroana ny baoritra.